Madaxweynihii hore ee Maraykanka Trump oo sheegay in Biden oo ku fashilmay hogaaminta Maraykanka | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweynihii hore ee Maraykanka Trump oo sheegay in Biden oo ku fashilmay...
Madaxweynihii hore ee Maraykanka Trump oo sheegay in Biden oo ku fashilmay hogaaminta Maraykanka
Donald Trump oo jeediyay khudbaddii u horreysay tan iyo markii uu ka baxay Aqalka Cad ayaa sheegay in uusan sameyn doonin xisbi cusub oo siyaasadeed, isagoo u sheegay shir ay Florida ku leeyihiin conservative-ka in tallaabadaas ay kala dhantaali doonto codadka xisbiga Jamhuuriga.
Khudbadda oo ahayd tii u horreysay ee uu Trump jeediyo tan iyo markii uu xukunka la wareegay Madaxweyne Joe Biden, ayaa waxa uu dadka dareensiiyay in madaxtinnimada uu markale u tartami karo doorashada 2024.
Trump ayaa si weyn u dhaliilay ninka xilka kala wareegay, isagoo sheegay in uusan mudnaanta siin siyaasadaha danta u ah Maraykanka.
“Joe Biden waxaa soo martay bishii ugu fashilka badneyd ee uu wajaho madaxweyne ka taliya Maraykanka taariikhda casriga ah. Durbadiiba maamulkiisa waxa uu muujiyay inuu ka horjeedo shaqooyinka, qoysaska, xuduudda, tamarta, dumarka iyo weliba sayniska,” ayuu yiri Trump.
\_Khudbaddiisa ayaa ku soo beegantay todobaadyo kadib markii lagu waayay dacwad ahayd inuu kiciyay dadkii weerarray xarunta baarlamaanka Maraykanka.
Saameynta siyaasadeed ee Trump
Khudbadda uu ka jeediyay kulanka Orlando ayaa muujinaysa in weli uu galaangal weyn ku dhex leeyahay xisbiga Jamhuuriga.
Shirka ayaa waxaa dowr muhiim ah ku lahaa taageerayaasha Trump oo ay ugu cadcad yihiin senator-ka gobolka Texas, Ted Cruz iyo wiilka uu dhalay madaxweynaha hoe ee Donald Trump Jr.
Trump waxaa weli saaran xayiraad ay ku soo rogeen baraha bulshada ee Twitter iyo Facebook, kuwaas oo dhaliilay qaabkii uu uga falceliyay weerarkii hubaysnaa ee January ka dhacay xarunta Capitol.
Tan iyo markii uu xilka ka degay waxa uu ku noolaa hoygiisa Mar-a-Lago ee gobolka Florida
Muxuu sheegay Trump?
74 jirka ayaa aad loo soo dhaweeyay markii uu soo fuulay masraxa shirka oo ka socda huteelka Hyatt Regency. Inta badan dadka goobta ku sugnaa ayaan xirneyn maaskaraha la isaga difaaco Fayraska Korona.
“Waxaan halkan u joognaa inaan ka hadalno mustaqbalka dhad-dhaqaaqeea, mustaqbalka xisbigeena iyo mustaqbalka dalkeena aan jecelnahay,” ayuu yiri Trump.
Waxa uu meesha ka saaray in uu xisbi cusub sameyn doono, isagoo sheegay in warkaas yahay “been abuur”.
“Waxaan haysanaa xisbiga Jamhuuriga. Waxaan ka shaqeyn doonaa midnimadeena iyo in aan xoojinno xisbiga si ka wanaagsan sidii hore.”
Inkastoo looga guulaystay doorashadii madaxtinimada ee dhacay November, si weyna loogu dhaliilay rabshaddii xarunta baarlamaanka ee January, ayaa hadda waxaa muuqata in Trump uu weli haysto shacbiyad badan.
Todobaadkii la soo dhaafay, ra’iyi ururin laga sameeyay Maraykanka ayaa tilmaantay in 46% dadkii su’aalaha la weydiiyay ay sheegeen inay Trump u codeyn lahaayeen haddii uu sameysto xisbi cusub.
Xildhibaannada Jamhuuriga ayaa intooda badan weli daacad u ah Trump. Taasi ayaa sabab u ahayd inuu ka badbaado dacwaddii looga soo oogay Congress-ka.
Shirka uu khudbadda ka jeediyay Trump oo soo bilowday 1974 ayaa loo arkaa kulanka ugu muhiimsan ay lagu jiheeyo mustaqbalka xisbiga Jamhuuriga.
Previous articleDalka Soomaaliya oo laga dareemaayo sara u ka cudurka Halista ee Karoone 19
Next articleMaraykanka oo sheegay in Ethiopia ay wado “olole nidaamsan oo ah isir sifayn gobolka Tigray
Ugu yaraan 34 qof ayaa ku dhintay xeebaha dalka Jabuuti kadib ay qalibantay dooni ay saarnaayeen, sida ay ku warrantay Ha’yadda Qaramada Midoobey u...
Dil ka dhacay maanta magaalada Muqdisho
Guddigii ay xukuumadda Soomaaliya u xil saartay baaritaanka dilkii guddoomiyihii degmada...
Wasiirka Xajka iyo cumrada ee Dalka Sacuudiga oo shaqadii laga cayriaay.
diyaarad Drone ah duqeyn ka fulisay duleedka degmada Jamaame ee gobolka...
Kooxo Burcad ah oo Koonfur Afrika ku dilat muwaadin Soomali...
20 sano ku dhawaad ayaan macallin ahaa, waxna ma qori karin...
Saaxiibada Caalamku Waxay Ku Baaqeen In Wadahadalku Sii Socdaan